ငါမော်ဒယ် AYFON ကိုဘယ်လိုရှာရမလဲ - IOS အတွက် - 2019
မကြာခဏလူတွေကိုလက်ဆောင်တစ်ခုပေးသို့မဟုတ်ကြောင့်သူတို့ရတယ်မော်ဒယ်ဘယ်လိုသိရန်လိုချင်တာတွေရန်, Apple ကကနေဖုန်းကိုချေး။ ပြီးနောက်အားလုံး, ဒီအရည်အသွေးနှင့်အင်္ဂါရပ်များနှင့်ကင်မရာ, screen resolution ကို, etc, run နိုင်သည့် applications များပေါ်တွင်မူတည်သည်
Learn သင်မည်သို့များ၏ရှေ့မှောက်၌က iPhone, သငျသညျကိုယျအဘို့မဝယ်ကြဘူးလျှင်ပင်ခက်ခဲသည်မဟုတ်။ အများဆုံးရိုးရှင်းသောနည်းလမ်း box ကိုအဖြစ်စမတ်ဖုန်း၏အဖုံးပေါ်တွင်ကျောက်စာစစ်ဆေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်သင်သည်လည်း iTunes ကိုသုံးနိုင်သည်။
Method ကို 1: အဆိုပါ box နဲ့ device ကိုဒေတာ
ဒီ option ကစမတ်ဖုန်းကိုစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်အထူးဆော့ဖ်ဝဲကိုအသုံးပြုခြင်းမရှိဘဲညာဖက် data တွေကိုရှာတွေ့ပါဝငျသညျ။
သတင်းအချက်အလက်ကိုရှာဖွေဖို့အတွက်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်း - ကအရောင်းရဆုံးစမတ်ဖုန်းထားတဲ့အတွက်အကွက်ကိုရှာပါတယ်။ ရုံကလှန်နှင့်သင့်စက်ကိရိယာနှင့်ရဲ့ IMEI ၏မော်ဒယ်အရောင်နဲ့အရွယ်အစားကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါ - ဖုန်းကိုမူရင်းမပါလျှင်, ထိုသေတ္တာထိုကဲ့သို့သောဒေတာရှိသည်မဟုတ်နိုင်ပါ။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ devaysa ၏စစ်မှန်မှုကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်းပါးအတွက်ညွှန်ကြားချက်ကို အသုံးပြု. သေချာပါစေ။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: စစ်မှန်ဘို့သင့် iPhone ကိုစစျဆေးဖို့ဘယ်လို
မော်ဒယ် number ကို
box ကိုအဘယျသို့က iPhone ၏ကြင်နာ, အထူးအရေအတွက်ကဆုံးဖြတ်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါလျှင်။ ဒါဟာစမတ်ဖုန်း၏နောက်ဘက်အောက်ခြေမှာတည်ရှိသည်။ ဒါဟာအက္ခရာနံပါတ်နှင့်အတူစတင် တစ်ဦးက.
အဲဒီနော, သင်မော်ဒယ်အရေအတွက်ကိုက်ညီသည့်တွေ့မြင်နိုင်သည်ဘယ်မှာ Apple ရဲ့တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်, သွားပါ။
ဤ site ကိုလည်းထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် device ကိုသတ်မှတ်ချက်များရာနှစ်သိရန်အခွင့်အလမ်းရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, အလေးချိန်, မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား, etc ဤအချက်အလက်သစ်တစ်ခု device ကိုမဝယ်ခင်လိုအပ်နိုင်ပါသည်။
ဤတွင်အခြေအနေကပထမဦးဆုံးအမှု၌ကဲ့သို့အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဖုန်းမူရင်းမဟုတ်ပါဘူးလျှင်, အလောင်းတော်ကိုအပေါ်ကျောက်စာများနှင့်မဖြစ်နိုင်ပါ။ သင့်ရဲ့ iPhone ကိုစစ်ဆေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ website တွင်ဆောင်းပါးထွက်စစ်ဆေးပါ။
အဆိုပါအမှတ်စဉ်နံပါတ် (IMEI) - 15 ဂဏန်းပါဝင်ပါသည်ရာတစ်ခုချင်းစီကိုကိရိယာများအတွက်ထူးခြားသောအရေအတွက်သည်။ သူ့ကိုကိုသိရှိပါကမိုဘိုင်းအော်ပရေတာကိုရည်ညွှန်းအိုင်ဖုန်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများကိုစစ်ဆေးကိုလည်းယင်း၏တည်နေရာကိုချိုးဖျက်ဖို့လွယ်ကူပါတယ်။ သင့်ရဲ့ iPhone ရဲ့ IMEI ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဘယ်လိုသတင်းအချက်အလက်အဘို့နှင့်မည်သို့အောက်ပါဆောင်းပါးများကိုဖတ်ပုံစံထုတ်ကိုရှာဖွေအသုံးပြုနိုင်ရန်။
IMEI iPhone ကိုသင်ယူဖို့ကိုဘယ်လို
Method ကို 2: iTunes ကို
iTunes ကိုသာဖြစ်ပါတယ် files ကို transfer အတွက်ကူညီပေးသည်နှင့်သင့်ဖုန်းကို restore ပြန်ပေမယ့်သည့်အခါယင်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများအချို့ဖေါ်ပြခြင်းကွန်ပျူတာတစ်လုံးချိတ်ဆက်တစ်မော်ဒယ်အပါအဝငျ။
သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ iTunes ကိုဖွင့်ပါပြီး USB-cable ကိုသုံးပြီး device ကိုချိတ်ဆက်ပါ။
မျက်နှာပြင်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းမှာ iPhone ကို icon ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
ပုံရိပ်မှာညွှန်ပြအဖြစ်တစ်ဦးက screen ကိုအလိုရှိသောသတင်းအချက်အလက်ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
iPhone အတွက်မော်ဒယ်သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်သင့်ရဲ့ smartphone ကိုဒေတာကို အသုံးပြု. အပေါ် iTunes ကိုသုံးစွဲဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူရန်ခက်ခဲသည်မဟုတ်။ ကံမကောင်းစွာပဲအမှု၌ဤအချက်အလက်သတ်မှတ်ထားသောသည်မဟုတ်။
ဗီဒီယို Watch: Xiaomi Mi9PARAMPARÇA! TÜRKİYE'DE İLK teknik özellikler! (စက်တင်ဘာလ 2019).